Waa maxay kuleylka buluuga ah? Wax walba waan kuu sheegeynaa | Cusbooneysiinta Cagaaran
Waa maxay kuleylka buluuga ah?
Suurtagal inaad waligaa maqashay jiritaanka kuleylka buluuga ah. The shucaaca kuleylka buluuga ah iyo kordhinta waxtarka kululaynta iyaga. Laakiin, illaa xad intee le'eg ayaad ka ogtahay kuleylka noocan ah oo ma ogtahay inay runti waxtar leedahay? Waxaa laga yaabaa inay tahay istiraatiijiyad kale oo suuq-geyn ah oo shirkado ku ciyaaraan baahiyaheena si ay nooga dhigaan inaan soo iibsanno alaabooyin cusub, oo "hal-abuur leh".
Maqaalkan waxaan ku guda galaynaa muxuu yahay kuleylka buluugga ah, sida uu u shaqeeyo iyo haddii uu runtii ka waxtar badan yahay kuwa kale. Marabtaa inaad waxbadan kabarato?
1 Waa maxay kuleylka buluuga ah?
2 Faa'iidooyinka kululaynta
3 Faa’iido darrooyinka isticmaalkiisa
4 Isticmaalka hiitarka kuleylka buluuga ah
5 Ma mudan tahay in lagu rakibo guriga?
Kuleylka ama tamarta buluuga ah waa eray aan gebi ahaanba caddeyn weli. Dad badan ayaa wax ka weyddiiya sababta oo ah shaki ayaa isa soo taraya. Ereygan wuxuu ka yimid shucaaca jiilkii ugu dambeeyay. Iyagu waa isbeddelka shucaaca saliidda korantada ee caadiga ah tan iyo markii ay sidoo kale u adeegsadaan iska caabiyeyaasha kuleylka. Gaar ahaan, waxay isticmaalaan kuleylka buluuga ah, maadaama ay isticmaalaan walax ah dareeraha gudbinta kuleylka ee loo yaqaan "Blue Sun".
Taasi waa halka magaca uu ka yimid kuleylka iyo hiitarka cusub. Si aad u fahamto waxa kuleylkan buluuga ah uu ku saleysan yahay, waa inaad u safartaa 1841 halka James Prescott wuxuu helay saamaynta Joule. Saameyntani waa tan ka caawineysa in la go'aamiyo haddii korantada korantadu ay dhex marto koronto-qabte. Waa la ogyahay sababta oo ah qayb ka mid ah tamarta tamarta ee korantada korantada, markay marayaan dareeraha, waxaa loo beddelaa kuleyl. Tani waa mabda'a shucaaca kuleylka buluuga ah.
Marka la eego koronto ku socota dheecaanka gudbinta kuleylka, waa la kululeyn karaa si loo kordhiyo heerkulka qolka ay ku taal.
Si aan wax badan uga ogaano kuleylka noocan ah, waxaan falanqeyneynaa faa'iidooyinka iyo faa'iido darrooyinka ay leeyihiin marka la isticmaalayo.
Faa'iidada ugu weyn ee ay leedahay waa taas waxay isticmaali karaan baaritaan si loola socdo heerkulka. Sidan oo kale, waxay si weyn u noqdaan kuwo sax ah waxayna ka hortagaan tamarta in la khasaariyo. Marka la eego badbaadinta biilka korantada, tani waa arrin wanaagsan oo laga fiirsado.
Guud ahaan, waxay la mid yihiin hiitarka caadiga ah. Si kastaba ha noqotee, way ku kala duwan yihiin taas, dhinaca kale, dareeraha beddelaya saliidda nolosha oo dhan wuxuu ku wareegayaa gudaha iyo, dhinaca kale, inay leeyihiin saacad. Mar labaad waa cunsur kale oo lagu xisaabtamo keydka. Waxaan u qorsheyn karnaa inaan heysano illaa inta aan dooneyno anaga oo aan khasaarin tamar ama lacag. Barnaamij-sameeyaha ayaa sidoo kale habeeya heerkulka.
Hawada ay qalabka ka saaraan korka waxaa lagu qaybiyaa qolka oo dhan. Sidan ayaad kuleyli kartaa si wax ku ool ah oo dhakhso leh.
Ma soo saaraan gaasyo, ur ama haraag.
Qiimaha rakibaadda ayaa aad uga hooseeya kuwa matoorrada kuleylka. Waxay ku leeyihiin nidaamyo hagaajin fudud darbiga.
Muuqaal kale oo taagan, oo aan muhiimad gaar ah lahayn, ayaa ah in qaabeynta ay ka soo jiidasho badan tahay kuwa caadiga ah. Muuqaalkaani waa bilicsanaanta oo dhan, laakiin waxaa fiican inaad xisaabta ku darsato haddii ay gacan ka geysaneyso qaabeynta qolkaaga fadhiga.
Faa’iido darrooyinka isticmaalkiisa
Sida shucaaca kuleylka buluuga ah ay u leeyihiin faa iidooyin, waxay sidoo kale leeyihiin cillado marka la isticmaalayo.
Mararka qaarkood, awood u leh inay isticmaalaan koronto badan, markaa waxay ka wax qabad yaraan karaan kana qaalisan yihiin nidaamyada kululaynta caadiga ah.
Waxaa la dhihi karaa adeegsiga kuleylka buluuga ah ayaa ka xiiso badan guryaha ku yaalo meelaha leh cimilo diiran mana ahan in loo isticmaalo sida badan. Guud ahaan, waxaa loo isticmaalaa xaaladahaas aan loo baahnayn in muddo dheer la isticmaalo. Marka, waa inaanu barnaamij ka dhignaa, si dhakhso leh u kululee qolka oo aan ku gaadhnaa raaxo iyada oo aan kharash badan oo tamar ahi jirin.
Isticmaalka hiitarka kuleylka buluuga ah
Si loo tixraaco isticmaalka marka la barbar dhigo hiitarka caadiga ah, waa inaad aragtaa wax qabadkooda. Wax ku oolnimada qalabka waa xiriirka ka dhexeeya kuleylka uu dhaliyo hiitarka iyo tamarta uu cuno. Sidaa darteed, waxqabadka shucaacyadan waa 100%, marka loo eego 360% ee kuleylka kuleylka. Tani waxay naga dhigeysaa inaan aragno in soosaarka tamarta uu qaali yahay.
Haddii nidaamka aad rabto inaad isticmaasho uu yahay in lagu soo saaro kuleyl koronto, maxaa yeelay gurigu malaha marin gaas, maxaa yeelay ma jirto meel lagu rakibo taangiga naaftada, iwm. Waa inaad tixgelisaa xulashada rakibidda mashiinka kuleylka ama kuleyliyaha buluugga ah.
Ma mudan tahay in lagu rakibo guriga?
Ka dib markaad akhrisid wax walba oo ku saabsan kuleylka buluuga ah, laga bilaabo waxa ay tahay in la isticmaalo, hubaal su'aashu waxay soo ifbaxaysaa haddii ay mudan tahay in lagu rakibo gurigaaga iyo haddii ay noqonayso kharash aad u badan. Hagaag, aan u gudubno qaybo. Marka hore, waa inaad ogaataa dhammaan istiraatiijiyadda suuqgeynta ee kuleylka buluugga ahi ku leeyahay asalka. Malaha, haddii ganacsi yimaado gurigeenna oo lagu iibiyo hiitaraceyaal caadi ah, goor dhow ayaan iska tuuri doonnaa.
Si kastaba ha noqotee, haddii ay bilaabaan inay nagala hadlaan kulaylka buluuga ah, ugu yaraan waan xiiseyn lahayn. Waa inaad aqbashaa in shaygan kuleylka buluugga ah uu u muuqdo mid aad u wanaagsan oo umuuqda inuu sheegayo kacaan dhan farsamo. Tani sidan ma aha. Kaliya waa hiitarka caadiga ah in, halkii aad saliid ka isticmaali lahayd, uu isticmaalo nooc kale oo dheecaan ah. Marka korantada korantada ay dhex marto, way kululaataa hawaduna waxay ku faaftaa qolka oo dhan.
Goorma ayuu hiitarka kuleylka buluuggu nagu habboon yahay goormaase habboonayn? Waa wax aad u fudud. Meelahaas ama cimilada ama qaab nololeedka guriga awgood, looma baahna in la isticmaalo muddo dheer ama in lagu kululeeyo qolal badan. Waa inaad uga faa'iideysataa kuleyliyahan adeegsiyo gaar ah oo aad uga faa'iideysataa xawaaraha ay leeyihiin si ay u kululeeyaan qolka cabbirka caadiga ah Haddii aan u baahanahay kuleyl waqti dheer, isku day nidaamyada kale ee kuleylka sida matoorrada kuleylka ama a heerkulka wifi.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad ka barateen kuleyliyayaashan oo aan lagu siri doonin xeeladaha suuqgeynta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Kaydinta tamarta » Dhaqaalaha Guriga » Waa maxay kuleylka buluuga ah?
Waa maxay tamarta nukliyeerka? Dhammaan waxaad u baahan tahay inaad ogaato